यस्तो रहेछ् नेपालको भूमिगत सेक्स स्टेसनहरू … बिस्तारमा जान्नुहोस !
काठमाडौँ । फलानो होटलमा छापा मारेर प्रहरीले यति जोडीलाई आपत्तिजनक हालतमा पक्राउ गर्यो भन्ने समाचारहरूमा अब कुनै नवीनता छैन। देशका मुख्य शहर र शहरोन्मुख गाउँहरूमा खुलेआम देहसुखको खरिदबिक्री भइरहेको छ। यौनकर्मीहरूले रेडलाइट एरियाको माग गरेको पनि वर्षौं
के हो ‘डिजिटल फरेन्सिक’ ? नेपाल प्रहरीले यो प्रविधिको प्रयोग सुरु !
काठमाडौँ । अपराधमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले ‘डिजिटल फरेन्सिक’ प्रविधिको प्रयोग सुरु गरेको छ । साठीऔँ अपराध अनुसन्धान दिवसको अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले अपराध अनुसन्धान विभाग, प्रहरी प्रधान
युवतीले अन्डरवियर लगाउन नपाउने देश यि हुन् : थाहा पाउनुहोस्
एजेन्सी । युवतीहरुले अन्डरवियर लगाउन नपाउने देश काहि छ भनेर थाहा पाउनु भएको छ । यदि छैंन भने यो कुरा पनि थाहा पाइराख्नुहोस् की कजाकिस्तान, बेलारुस र रुसमा महिलाहरुले अन्डरवियर ९अन्त वस्त्र० लगाउन नैं पाउदैंनन् । यसको विरोधमा अहिलेसम्म महिलाहरुले धेरै
ज्ञानबर्दक यौन टिप्स : कति बेला गर्ने यौन सम्पर्क ? जानी राख्नुस
ज्ञानबर्दक यौन टिप्स : प्रत्येक व्यक्तिको लागि सम्भोग गोपनीय र निजी कुरा हो । प्रत्येकको सम्भोगमा आ–आफ्नै अनुभव र तरिका पनि हुन्छन् । तर पनि सामान्यतया सम्भोग चरम सुख प्राप्त गर्न केही ध्यान पु¥याउनु पर्छ । सम्भोग क्रिया थाल्नु भन्दा पहिले वातावरणमा विशेष
युवतीले टाइट पाइन्ट लगाउदा अस्पतालमा नै भर्ना हुन् परेपछी
एजेन्सी । निकै कसिलो जिन्स लगाउने शोख एक युवतीका लागि यति भारी सावित भयो की उनले लगातार ४ दिनसम्म अस्पतालको बास हुनुपर्यो । अस्ट्रेलियाको एडिलेडकी ३५ वर्षीयाले यति कसिलो पाइन्ट लगाएकी थिइन् की बढि कसिएपछि रक्तनली समेत थुनिएर उनका खुट्टाहरुमा रक्तप्रवाह नै
यि सुन्दरीले सामाजिक सञ्जालमा फोटो अपलोड गरेरै कमाउँछिन् लाखौं
ग्राबियल्ली इपिस्टिन अहिले २१ वर्षकी छिन् । उनी सामाजिक सञ्जाल इस्टाग्राममा चलेकी मोडल हुन् । विभिन्न सामाग्रीहरुका विज्ञापनमा समेत उनी छाउँछिन् । तर उनलाई स्टेज शो तथा मोडलिंगमा भन्दा बढी रुची इस्टाग्राममा फोटो अपलोड गर्नमै छ । यसको प्रमुख कारण उनले
के हो ‘नेट टिभी नेपाल’ ?
नेट टिभी नेपालले एन्ड्रोइड फोन र आइफोनको लागी ‘फ्रि मोबाइल एप्लिकेसन’ सार्बजनिक गरेको छ । छिट्टै सेटअपबक्स मार्फत नेपालमा आइपी टेलिभिजन सेवा सुरु गर्ने क्रममा रहेको नेटटिभीले नेपालका लागी फ्रि-मोबाइल एप्लिकेसन सार्बजनिक गरेको हो । सो एप मार्फत
अब तपाईं घरको नक्सा लिन कार्यालय धाइरहनुपर्दैन ! इन्टरनेटबाटै नक्सापासको सूचना
काठमाडौं । अब तपाईं घरको नक्सा लिन कार्यालय धाइरहनुपर्दैन। आफ्नो नक्सा नम्बर हेरेर घरबाटै नक्सा पास भएको जानकारी पाउनुहुनेछ। नक्सा मात्रै नभएर नागरिकता, लालपुर्जासमेत इन्टरनेटबाटै पाउनुहुने भएको छ। नक्सा पास गर्दा आर्थिक चलखेल, प्राविधिक त्रुटि र सक्कल
इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका लागी सहज बनाउने वेब टुल्स
नेपाली टुल्स् डटकम अनि फिचर्स :: अन्य विकशीत देशहरुको तुलनामा नेपालमा इमेल इन्टरनेटको विकास भएको त्यति लामो समय भएको छैन । तर पनि निकै छोटो समयमा उल्लेख्य प्रगति भई सूचना, संगीत, ब्यापार, खबर आदानप्रदान गर्ने सबै क्षेत्र इन्टरनेटले ओगटीदैँ आएको अवस्था छ
Nepali Girl who was Raped by her dad : Pooja Karki
an interview and real story of victim pooja karki who was raped by her own father...very heart touching story ...god bless her. I cannot believe this, it makes me so upset! I cannot imagine what you've been through :'( most victims in nepal keep the rape incidentasecret which allows the rapist to roam free! it may happen to more and more girls! Those disgusting men needs to get punished but the law in nepal is so weak, we need more strict laws to makeachange! Mero didi and bahinis in nepal if you have been sexually assaulted do not try to kill yourself! it is important to remember that it wasn’t your fault. Sexual violence isacrime!!!! no matter who
छोरी जन्मिएको खुसीमा जुकरबर्गले फेसबुकको ९९ प्रतिशत हिस्सा दान गर्ने घोषणा
एजेन्सी । सामाजिक संजाल फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्गले आफ्नी छोरी जन्मिएको खुसीमा आफ्नो धेरैजसो सम्पती दान गर्ने घोषणा गरेका छन् । जुकरबर्गले आफ्नी छोरीको नाम म्याक्स राखेको जानकारी गराउँदै उक्त खुसीयालीमा आफ्नो जीवनकालमै आफु र श्रीमती प्रिसिलाको
एयरपोर्टमा अचानक पोर्न फिल्म चल्न थाले पछि तहल्का मच्चियो
पोर्चुगलको लिस्वन एयरपोर्टमा हालै एउटा अनौठो तथा लज्जाजनक घटना भयो जसका कारण केही बेरलाई देख्नेलाई लाज भयो र सबै मानिस स्तब्ध भए । लिस्वन एयरपोर्टमा रहेको ठूलो टेलिभिजन स्क्रिनमा अचानक पोर्न फिल्म चल्न लागेपछि त्यहाँ रहेका मानिसहरुका एकाएक पसिना छुट्न